चन्द्रागिरी हिल्सको मंसिर १७ गतेदेखि आईपीओ आउँदै - Aarthiknews
काठमाडौं । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले पहिलो चरणमा मंसिर १७ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानियका लागि आईपीओ विक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले स्थानियका लागि ३ लाख ६ हजार ८१९ कित्ता शेयर विक्री खुला गर्न लागेको हो ।
यो आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गत चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नंम्बर ३, ४, ६ र ७ साविक थानकोट गाविसका सम्पूर्ण वडा र साविक महदेवस्थान गा.वि.स.को वडा नं. ३, ४, ५, ६, ७, ८, एवं मकवनपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका वडा नं. ९ र १० (साविकको चित्लाङ्ग गाविसको सबै वडाहरु) र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं ५ (साविक फाखेल गाविसका सम्पूर्ण वडाहरु) का स्थानियहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । स्थानियले न्युनतम १० कित्ता देखि अधिकतम ३ हजार ६० कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
छिटोमा पुस १ गते र ढिलोमा पुस १६ गतेसम्म विक्रीमा रहने यो आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । यस कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि कुल १८ लाख ४० हजार ९१० कित्ता आईपीओ विक्री गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कार्तिक २८ गते अनुमति पाएको छ । पहिलो चरणमा स्थानियका लागि २ प्रतिशत शेयर जारी गर्न लागेको हो । दोस्रो चरणमा १० प्रतिशत दरको कम्पनीको कर्मचारी समेत गरी १५ लाख ३४ हजार ९१ कित्ता शेयर अन्य सर्वसाधारणमा जारी हुनेछ । आईपीओ पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ९१ हजार पुग्नेछ ।
हाल यस कम्पनीको संस्थापकबाट चुक्ता भएको पूँजी रू. १ अर्ब ३५ करोड रहेको छ । यस कम्पनीले केबुलकार, होटल तथा रिसोर्ट र एम्बुजमेण्ट पार्क लगाएतका परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्मको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ९६ दशमलव ६९ रहेको छ ।